Inona ny serivisy serivisy serivisy momba an'i Yiwu Yiyun Clothing Co, Ltd?
Ny orinasa anay dia mifantoka amin'ny varotra sisintany sy ny varotra eran'izao tontolo izao sy ny fanamboarana ny varotra, manome tolotra toy ny famatsiana toerana, ny fanamboarana ny jiro, ny fametahana ny marika, ny marika ary ny fanamboarana manokana ny fomba sy ny habeny ary ny loko, ary koa ny serivisy fanondranana entana.
Manao ahoana ny kalitaon'ny vokatrao? Ary inona no antoka azo omena ho an'ireo mpanjifa sisintany?
Ny kalitaon'ireo vokatra vokarintsika dia nohosorana nandritra ny am-polony taona taorian'ny nikirizan'ny vokatra ny tsena eran'izao tontolo izao miaraka amina vokatra sy serivisy avo lenta ho toy ny marika ho antsika. Ankoatr'izay, manome vokatra miaraka amin'ny ambaratonga isan-karazany isika mba hividianana ny filan'ny tsena samihafa manerana izao tontolo izao. Noho izany, ny kalitaon'ny vokatra dia azo antoka miaraka amin'ny serivisy aorian'ny varotra varotra ho an'ny fotoana tsy voafetra nomena.
Milamina ve ny famatsiana ny vokatrao?
Nanamboatra rojom-pamatsiana maharitra izahay, miaraka amin'ireo vokatra enti-miasa dia mitentina hatramin'ny 10 tapitrisa dolara, izay rojohon'ny famatsiana mitohy sy haingana.
Manao ny haben'ny fampandrosoana ny orinasanao amin'ny sehatra ivelany?
Ny orinasantsika dia manana toeram-pivarotana roa any Yiwu International Wholesale Market, Zhejiang. Natsangana koa ny biraontsika ao amin'ny World-Wide House, ary ny zavamaniry famokarana any Jiangsu sy Guangzhou. Tonga ny mpitsidika eto an-tany rehetra hitsidika sy hividy ny vokatra.